कलाकारको टकराव, कस्को को सँग झगडा, ८ देखि १० वर्षसम्म बोलचाल बन्द ? – ताजा समाचार
कलाकारको टकराव, कस्को को सँग झगडा, ८ देखि १० वर्षसम्म बोलचाल बन्द ?
हुनत, फिल्म क्षेत्र नै अरुको डाहा गर्ने र आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउन खोज्ने क्षेत्र हो । यहाँ आइसकेपछि कलाकारहरुमा यो कुरा स्वभाविक रुपमा उत्पन्न हुन्छ । अझ, कलाकारमा कसलाई कसरी होच्याउने, तल गिराउने, अरुले गर्न लागेको काम आफूले कसरी हत्याउने भन्ने सधै नै हुन्छ । यो पहिले पनि थियो । अहिले पनि चलिआएको छ ।
नेपाली कलाकारमा एक अर्काको टकराव खुबै छ । बाहिर सार्वजनिक नगरेपनि कलाकारहरु भित्री रुपमा एक अर्कालाई दुश्मन सोझ्छन् । नजिककै साथीको सिनेमा समेत खोसेर आफै गरिहालौ भन्ने सोच उनीहरुमा देखिएको छ । अझ, केही कलाकारको समुह बनाएर अरुलाई सक्ने, तल पार्ने खेल त नयाँ नै भएन ।
अभिनेत्री पूजा शर्मा र स्वस्तिमा खड्काविच नयाँ खालको टकराव सुरु भएको छ । स्वस्तिमाले एक कार्यक्रममा २० लाख पारिश्रमिक लिने कलाकारले ५० लाख उठाउन पर्ने, ५ लाख पनि फिल्मले नउठाए त नमज्जा हुने भनेर प्रतिक्रिया दिइन् । स्वस्तिमाको यो प्रतिक्रिया पूजा शर्मा केन्द्रित थियो भनेर सबैले वुझे । किनकी, अहिलेसम्म २० लाखको चर्चामा पूजा मात्र घेरिएकी छिन् ।
स्वस्तिमाको यो भनाइमा पूजाका फ्यानले आक्रोश पोखे । पूजा आफैले पनि घुमाउरो पारामा स्वस्तिमाको कुरामा असन्तुष्टी जनाइसकेकी छिन् । अभिनेत्री पूजा र स्वस्तिमाविच नयाँ टकराव देखिएको छ । पूजा र अभिनेत्री आँचल शर्माविचको टकराव पनि पुरानो नै हो । आँचलले वेला बेलामा पूजा केन्द्रित स्टाटस लेख्छिन् । बाहिर हेर्दा मिलेको लागेपनि आँचल र पूजा अघोषित दुश्मनीमा छन् ।
अभिनेत्री वर्षा राउत र वर्षा सिवाकोटीको टकरावलाई पनि फिल्म क्षेत्रमा धेरैले नजिकबाट नियालेका छन् । अझ, वर्षा र वर्षा फिल्म सँगै जुध्दा सिवाकोटीले राउत लक्षित स्टाटस धेरै लेखिन् । उनले, लेखेको स्टाटसमा वर्षा राउतले सफ्ट प्रतिक्रिया जनाइन् । उनीहरुले एकैसाथ फिल्म हेर्ने काम समेत गरे । तर, जसले जसरी हेरेपनि यी दुई अभिनेत्रीविच एक अर्कामा अघोषित टकराव नै छ ।
अभिनेत्री सुष्मा कार्की र पूजा शर्मामा पनि बोलचाल छैन । पूजा र सुष्मा यति एकसाथ कुनै कार्यक्रममा पुगेपनि उनीहरुले एक अर्कालाई मत्तलव गर्दैनन् । एकपटक सुष्माको अघि बसेकी पूजासँग सुष्मा नबोल्दा सार्वजनिक भएको भिडियो भाइरल नै भयो ।
अभिनेत्रीमा मात्र होइन, अभिनेताहरुमा पनि टकराव छ । अभिनेता राजेश हमाल र भूवन केसीमा महनायक भन्ने शब्दमा नै टकराव छ । भूवन केसी हमाललाई यो शब्दले सम्बोधन गरेकोमा खुशी छैनन् ।
अभिनेत्री रेखा थापा र अभिनेता आर्यन सिग्देलविच ८ बर्षसम्म बोलचाल नभएको घटना पनि अब पुरानो भैसकेको छ ।
विशेषगरि, कलाकारहरु हिट हुँदै गएपछि एक अर्कासँग इगो राख्न थालेको पाइन्छ । फ्लप कलाकारको दुश्मन कम हुन्छन् । तर, विस्तारै जब कलाकारमा हिटको घमण्ड चढ्न थाल्छ, त्यसपछि भने उनीहरुमा अरुलाई नटेर्ने, अरुको इज्जत नगर्ने स्वभाव बढ्छ । जसले एक अर्कामा टकराव सुरु हुन्छ । तर, कलाकारहरुले के वुझ्दैनन् भने स्टारडम आज छ भोली छैन । चाडै बनेर चाडै सकिने स्टारडम घमण्डले होइन, मिठो बोली र सरल व्यवहारले टिक्छ भन्ने उनीहरुलाई कसले सिकाइदिने खै ?